China 4 TON 4 × 4 Anọ ntụgharị maka onye na-emepụta ngwa ngwa na ngwa ahịa | Wilk
4 wheel mbanye forklift gwongworo
4WD Forklift ụgbọala
4WD n'azụ ụgbọ Forklift Trucks
Azụ azụ azụ
Hodị Loader Backhoe
Azụ azụ azụ maka ọrịre
Ndị na-egwupụta ihe
Ndị na-egwu ala maka iku
Ngwuputa ndi na-egwuputa ihe
ihe igwekota igwe
Concrete inggwakọta Machines
Ndị na-ebu Wili
China Wheel Ibu Ibu
N'ihu Ibu Ibu
Mini Wheel Ibu Ibu
4 TON 4 × 4 Anọ na-atụgharị Forklift
WIK4 wheel forklift truck nwere oge anọ nwere ụkwụ anọ, nke na-eme ka ikike nke forklift dịkwuo ukwuu. Ọ bụ ụgbọ ala injinia nke nwere ike ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-ebudata, na-ebugharị ma na-arụ ọrụ nke ọma na ala na-enweghị atụ dịka apịtị, ubi, na ugwu. Ọ nwere ezigbo ọrụ ọfụma, na-agafe arụmọrụ na njikwa. Ọ nwere ike dochie ihe mgbakwunye dị iche iche iji melite arụmọrụ ọrụ. Akụrụngwa maka ibu na ibutu ihe na ebe a na-ekesa ngwongwo nwere ọnọdụ okporo ụzọ adịghị mma dịka ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, na ọdụ.
WIK 4 wheel wheel forklift ụgbọala bara uru:
1. Ọdịdị mara mma, usoro kọmpat, obere radius na-atụgharị, ọkụ na ngbanwe na-arụ ọrụ, nwere ike ịrụ ọrụ na obere oghere, ike ikuku ụgbọ mmiri zuru ezu, na-agagharị na oche na ọnọdụ nwere ike idozi ya na ihu na ihu na azụ, iji bulie ihe ọchọrọ nke onye ọkwọ ụgbọ ala. .
2. Ntọala nke ọ joụ dị iche iche dị iche iche dị ka ihe dị mkpa nke ergonomics iji belata ike ọrụ ma melite arụmọrụ mmepụta.
3. Wide view mast, onye ọkwọ ụgbọala nwere echiche sara mbara, yabụ forklift a dị mma maka ibudata na ibudata, ịkwado na njem njem dị mkpirikpi n'ọhịa na n'èzí.
(1) Ọ nwere ezi passability na anya-ụzọ niile-wheel mbanye. Enweghị ọdịiche dị n'etiti axles na nnukwu-dayameta obosara-isi na-apụ na-eji taya. Ntọala ala nke ụgbọ ala kachasị elu karịa 300mm na akụkụ ọpụpụ karịrị 30 Celsius.
(2) Jiri okpokoro nkpuchi mee ihe. Ngabiga akụkụ nke etiti bụ n'ozuzu ± 30 Celsius ~ 40 Celsius. Usoro nchịkwa ahụ dị mfe ma ọ chọghị axle draịva dị oke ọnụ. Ọ nwere ike nweta obere okirikiri ịtụgharị okirikiri, na-achịkwa sterịn wiil ka ịgbanye etiti kwụ ọtọ, na-eme ka ndụdụ mfe mmezi N'ihi na ihe onwunwe, n'ihi na obere-tonnage cross-mba forklifts, ihe integral etiti nwere ike iji, na otu-axle mbanye na mkpọchi dị iche na axle draịva.
(3) Niile ụkwụ-brek. Ma e wezụga obere tonkage forklifts na-eji ịgbatịkwu akpụkpọ ụkwụ na-abawanye ụba, ọtụtụ n'ime ha bụ breeki caliper diski, na ụfọdụ forklifts dị arọ na-ejikwa brek mmiri. Ebe a na-adọba ụgbọala bụ breeki aka na - anọkarịkarị.
(4) Maka 2k ~ 3t jikọrọ forklifts, ihu na azụ na-ahụkarị.
(5) Azụ azụ nke obe-forklift dịgidere na etiti ahụ, na ihu ihu ihu nwere ike ịgbanye ihu ± 8 Celsius ~ 12 Celsius na etiti ahụ. A na-edozi silinda na-akwado ya n'etiti etiti na ihu ihu. Mgbe ndụdụ ahụ na - ebuli elu, a na - echekwa mast ahụ na - ebuli elu n'akụkụ mpụta site na iji aka na hydraulic cylinder; mgbe forklift na-akwọ ụgbọala, a na-ekwe ka ụlọ elu na nke ala nke hydraulic gafere site na oghere ndị na-egbochi mmiri, nke bara uru iji melite nkasi obi nke ụgbọ ahụ.
(6) O nwere ụkwụ ebumnobi ukwu na wiilị. Mee ka nkwụsi ike nke forklift dịkwuo ogologo.
(7) bilitygagharị agagharị. Vehiclegba ọsọ ọsọ kachasị bụ n'ozuzu (30-40) km / h. Ihe ike dị elu karịa 0.65, osooso ịnya ụgbọ ala dị mma, ọ nwekwara ikike ịrị elu nke 25 Celsius ~ 30 Celsius.
(8) Nnukwu akụkụ mast. Nke a dị mkpa maka ịrụ ọrụ nchekwa na ịnya ụgbọ ala na-enweghị atụ, n'ozuzu 10 Celsius ~ 15 Celsius na 15 Celsius azụ.
(9) Ọnọdụ nke oche ọkwọ ụgbọ ala. Iji hụ na onye ọrụ ahụ nwere echiche ka mma n'oge arụ ọrụ, a na-etinye oche ọkwọ ụgbọala n'ihu. Maka forklifts ndị edepụtara edebe, tinye ha n’ihu ihu dị ka o kwere mee.
WIK 4 wheel mbanye forklift gwongworo metụtara oke:
Gosiri ibu (n'arọ)
Ihapu elu (mm)
Vegbọ ala mma (n'arọ)
Oke adighi onye ikpe (°)
Ọkara siri ike
Mast n'ihu nwechapụ (mm)
N'etiti wheelbase dị na mwepụ nke ala (mm)
Oche ụkwụ (mm)
Opekempe atụgharị okirikiri (mm)
Engine ikike (kw)
3500 * 1850 * 2500
Jiri articulated etiti. Ngabiga akụkụ nke etiti bụ n'ozuzu ± 30 Celsius ~ 40 Celsius. Usoro nchịkwa ahụ dị mfe ma ọ chọghị axle draịva dị oke ọnụ. Ọ nwere ike nweta obere okirikiri ịtụgharị okirikiri, na-achịkwa sterịn wiil ka ịgbanye etiti kwụ ọtọ, na-eme ka ndụdụ mfe mmezi N'ihi na ihe onwunwe, n'ihi na obere-tonnage cross-mba forklifts, ihe integral etiti nwere ike iji, na otu-axle mbanye na mkpọchi dị iche na axle draịva.
Azụ axle azụ nke ụgbọ ala na-agbanye na etiti ahụ, na ihu ihu ihu nwere ike ịgbanye ihu ± 8 Celsius ~ 12 Celsius na etiti ahụ. A na-etinye silinda na-akwado ya n'etiti etiti na ihu ihu. Mgbe ndụdụ ahụ na - ebuli elu, a na - echekwa mast ahụ na - ebuli elu n'akụkụ mpụta site na iji aka na hydraulic cylinder; mgbe ụgbọala ahụ na-agba ọsọ, a na-eme ụlọ elu na nke ala nke cylinder hydraulic Nchikota site na oghere na-egbochi mmiri na-enyere aka melite nkasi obi nke ụgbọ ahụ.
A na-eji gwongworo forklift 4 wheel nwere chassis dị ike maka ibudata na ibudata akụrụngwa na ebe a na-ekesa ihe na ọnọdụ ụzọ adịghị mma dịka ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, na ọdụ. Ọ nwere ezigbo ngagharị na ụzọ arụmọrụ nke ụgbọ ala ndị na-apụ n'okporo ụzọ na arụmọrụ nke ndị nkịtị na-eme mkpọtụ. Enwere ike ịsị na ọ bụ njikọta dị ike. Ọsọ nke forklift na-apụ apụ dị elu karịa nke forklift nkịtị, nke na-egosi na mmegharị ya bụkwa ihe pụrụ iche iji wee nwee ike ịkwado ọnọdụ ọrụ. Ahụ dị obosara, nke nwere ike ibu ibu na-adịghị agbanwe agbanwe na obosara; nnukwu nwechapụ site na ala bụ iji kwado mgbochi mgbochi na saịtị ahụ; ọrụ ụkwụ anọ a na-arụ bụ iji hụ na ọrụ nkịtị na saịtị apịtị, na-ebuli akụrụngwa ọrụ, ma na-ebutu ike na nnukwu Breaking, nhazi akpaka nke ibudata, arụmọrụ dị elu na obere mmanụ ọkụ.
4 wheel forklift bụ isi ihe eji ebu maka ibudata na ibudata arụmọrụ n'okpuru ọnọdụ ubi. O nwere ezi ngbanwe nke ugbo ala ndi ozo na ndi oru ugbo nke ndi ozo. Wheelsgbọ ndị na-akwọ ụgbọ ala na-ejikarị azụ azụ, ụkpụrụ miri emi, na ụgbọ ala na-agafe agafe. Taya. Ejiri ngwaọrụ nnyefe nwere mkpọchi dị iche ma ọ bụ usoro amachi amachi iji hụ na taya nke ụgbọ ala ahụ niile ga-amị n'okporo ụzọ mmiri. Na usoro nke nhazi, iji hụ na ụgbọala ahụ agaghị agagharị n'okporo ụzọ, mgbe ị na-ezute ikike ebuli elu nke ụgbọ ahụ. Gbaa mbọ hụ na ụgbọala kwụsiri ike site na ịba ụba nke wiilị, si otú a hụ na nchekwa nke onye ọkwọ ụgbọ ala, ụgbọ ala na ibu ahụ
4 wheel mbanye forklift adopts anọ na-wheel mbanye nnyefe. Ihu ihu na azụ na-ebu ike. Mmepụta mmepụta nke injin ahụ nwere ike kesaa na wiil niile na azụ azụ n'ụdị dị iche iche dịka ọnọdụ dị iche iche dị. Ejiri ngwa mgbochi skid kwadebe ya, injin yana ihe eji arụ ọrụ gearbox. Ọ nwere kọmpat ma nwee ike ịrụ ọrụ n'okporo ụzọ ndị dị mgbagwoju anya dịka ọhịa, ugwu, na ụzọ apịtị. Wheels agaghị amị amị n'ụzọ dị mfe mgbe ụzọ ọnọdụ dị njọ. Ntinye ikike bụ ọtụtụ nnyefe hydraulic ma ọ bụ nnyefe hydrostatic, nke nwere ezi ntụgharị uche na ịgafe.
Nke gara aga: 3.5 TON 4 × 4 Anọ ntụgharị Forklift
Osote: ọ isi bughi atụmatụ na elu uzu ojiji na WIK30-25 Backhoe Loader
3 ton 4WD azumahia forklift gwongworo
WIK20-30 4 wheel mbanye forklift gwongworo
3TON 4WD kgbọala Forklift
3.5ton 4WD steering forklift Trucks
3.5 TON 4 × 4 Anọ ntụgharị Forklift